16 | December | 2016 | nepalbritain.com
जापान बस्ने थापाले दाङमा दिए ३० लाखको सोलार
December 16, 2016 | Comments Off on जापान बस्ने थापाले दाङमा दिए ३० लाखको सोलार
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अभियन्ताले पश्चिम दाङको एक विकट गाँउमा ३० लाख रूपैया वरावरको सोलार पावर सहयोग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका सल्लाहकार चिरिन्जीवी थापाले दुर्गम क्षेत्रमा विजुली तथा सिंचाईमा सहयोग पुरयाउने उदेश्यले सो सामाग्री सहयोग गरेका हुन् । शुक्रवार एक समारोहका वीच सो सहयोग सामाग्री नेपाल सरकारका मन्त्री दीपक गिरीले सो क्षेत्रका सर्वसाधारण थारू समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। थापाले विदेसमा बसेरमा पनि आफ्नो देशको लागि केही गरौं भन्ने भावनाले दुर्गम क्षेत्रमा सोलार पावर दिएको बताए । यो ठूलो सहयोग नभए पनि सहयोगको सुरुवात मात्र हो । हामी देशमा परि आउँदा सधैं सहयोग गर्ने छौं थापाले
December 16, 2016 | Comments Off on सुख्खायाममा लोडसेडिङ नहोला ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई देशभर नै लोडसेडिङ् मुक्त बनाउने अभियान यतिखेर तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । तर, एक तिहाई बिजुली उत्पादन घट्ने सुख्खायामको सिजन सुरु भइसक्दा सरकारले घोषणा गरेको लोडसेडिङ् मुक्त अभियानमा झनै चुनौती थपिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हाल उत्पादित ३ सय ८९, निजी क्षेत्रबाट २०२ र भारतबाट २१५ मेगावाट प्राधिकरणको केन्द्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको छ । तर, देशभर कुल ८०६ मेगावाट आपूर्ती भइरहेको बिजुलीको तुलनामा माग भने साढे १२ सय मेगावाट भन्दा माथि छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ सय मेगावाट विजुलीको माग रहेकोमा तिहारयता काठमाडौं उपत्यका भने चौविसै घण्टा झलमल छ ।
क्युबाले चेक गणराज्यलाई भन्यो, ऋणको बद्ला रक्सी लैजाऊ
December 16, 2016 | Comments Off on क्युबाले चेक गणराज्यलाई भन्यो, ऋणको बद्ला रक्सी लैजाऊ
क्युबाले चेक गणराज्यबाट ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको छ । यो ऋण रक्सी लिएर असुल गर्न क्युबाले चेक गणराज्यसँग आग्रह गरेको छ । चेकका अर्थमन्त्री यतिबेला क्युवाको राजधानी हवाना भ्रमणमा छन् । उनले भने, ऋण रक्सी लिएर असुल गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । क्युबाबाट चेकले २ सय ७६ मिलियन डलर उठाउन बाँकी छ । ऋण असुली गर्न क्युवाको प्रस्ताव चेक गणराज्य सहमत भयो भने उसका जनतालाई एक शताब्दीसम्म रम पुग्नेछ । यद्यपि चेक गणराज्य सबै ऋण रक्सीमा साट्न सहमत हुनेछैन । उसलाई केही नगद पनि चाहिएको छ । चेकले हवानालाई शित युद्धका बेला ऋण प्रवाह गरेको थियो, त्यसबेला
महँगी ४ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि
December 16, 2016 | Comments Off on महँगी ४ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा महंगी जम्मा ४ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको तथ्यांक सार्वजानिक भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक बर्षको ४ महिना अर्थात कात्तिक महिनामा ४ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै महंगी बढेको सार्बजनिक गरेको हो । गत वर्षको यस अवधिमा १० दशमलव ४ प्रतिशतले महंगी बढेको थियो । गत वर्षको नाकाबन्दीका कारण उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य अत्यधिक बढेको थियो । जस्को तुलनामा यो बर्ष महंगी घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा गैरखाद्य दुबै समुहको महंगी घटेको हो । कात्तिक महिनामा खाद्य समूहको महंगी २ दशमलव ६ प्रतिशतले बढको
गुल्मीमा झडप, सांसदसहित दर्जन घाइते
December 16, 2016 | Comments Off on गुल्मीमा झडप, सांसदसहित दर्जन घाइते
गुल्मी । ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विरोधमा गुल्मीमा जारी आन्दोलनका क्रममा शुक्रबार प्रहरी र बन्दकर्ताबीच झडप हुँदा गुल्मी सदरमुकाम तम्घास बजार तनाबग्रस्त बनेको छ । आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगाएको ताला प्रहरीले तोड्न खोज्दा झडप भएको हो । झडपमा नेकपा मालेकी सांसद कमला बिकसहित दुईदर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले करिब दुईदर्जन अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । आक्रोशित आन्दोलनकारीले दुईओटा सवारी–साधनमा आगजनी गरेका छन् । दमन गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुंगाना र प्रहरी नायव उपरीक्षक भोला रावलको सरुवाको माग गरेका छन् ।
चुनाव गर्ने हो भने मधेशको माग सम्बोधन गर : थापा
December 16, 2016 | Comments Off on चुनाव गर्ने हो भने मधेशको माग सम्बोधन गर : थापा
पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मधेसी दलका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मिडिया नेपाल कास्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो — ‘मधेसी दल र अन्य जनजातिले राखेका माग पूरा नगरी निर्वाचन गर्दा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन् ।’ अध्यक्ष थापाले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसवादी दललाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको, प्रदेश नं ५ का जनता आन्दोलित भएको र केही राजनीतिक दलले निरन्तर संसद् अवरुद्ध पारिरहेकाले नयाँ समझदारीका साथ विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिदैं विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्र्न नदिई संसद् अवरुद्ध गर्नु प्रजाताािन्त्रक मूल्य र मान्यताले उपयुक्त नभएको
December 16, 2016 | Comments Off on पुरस्कृत पत्रकार
नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरवहादुर देउवा, महामन्त्री डा. शशांक कोईरालालगायत अतिथिसँग शुक्रबार नवलपरासीमा सुर्यभक्त पतनादेवी राष्ट्रिय पत्रकारिताबाट पुरस्कृत पत्रकारहरु । तस्बिर: पुरुषोत्तम सुबेदी
१ कट्ठा जग्गा र ३ तोला सुन पनि मेरो होइन, पार्टीको हो : प्रम दाहाल
December 16, 2016 | Comments Off on १ कट्ठा जग्गा र ३ तोला सुन पनि मेरो होइन, पार्टीको हो : प्रम दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद र सडक अवरुद्ध गर्नुभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन प्रस्ताव असफल बनाउन विपक्षीलाई चुनौति दिएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले संबिधान संसोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताए । दलीय सहमतिमा प्रस्ताव परिमार्जन भने गर्न सकिने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति बिवरणका विषयमा उठेका टिप्पणी निराधार रहेको बताए । उनले आफूले सार्वजनिक गरेको एक कठ्ठा जग्गा र ३ तोला सुन पनि आफ्नो नभएर पार्टीको भएको जिकिर गरे । उनले आफुसंग अरु सम्पती भएको कसैले प्रमाणित गरे राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणासमेत गरे
तेह्रथुमको संक्रान्ति बजारमा भिषण आगलागी
December 16, 2016 | Comments Off on तेह्रथुमको संक्रान्ति बजारमा भिषण आगलागी
आठराई । तेह्रथुमको आठराईस्थित संक्रान्ति बजारमा आगलागी भएको छ । विहान करिव साढे एघार बजेतिर सुरु भएको आगलागीबाट बीस वटा भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएका छन् । पानीको अभाव र हावा चलेका कारण आगो नियन्त्रणमा लिन कठिनाई भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक भाग्येन्द्रपुरुष ढकालले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय अग्नि सेढाइको घरबाट सुरु भएको आगलागी केहीबेरमै फैलिएको हो । संक्रान्ति बजारमा अधिकांश घर काठको भएका कारण आगलागी चाडै फैलिएको हो । यसैबीच, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीले आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् ।
December 16, 2016 | Comments Off on एसिया कप क्रिकेट : नेपाल भारतसँग छ विकेटले पराजित
काठमाडौं । एसिसी उन्नाइस वर्षमुनि (यु–१९) एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा नेपाल भारतसँग छ विकेटले पराजित भएको छ । श्रीलङ्काको कोलम्बो क्रिकेट क्लबको खेल मैदानमा सम्पन्न खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित ५० ओभर पूरै खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा १७२ रन जोड्यो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको भारतले ३३ दशमलव ३ ओभरमा चार विकेट गुमाउदै १७४ रन बनायो । भारतका लागि शुभम गिलले ५७ रन, हिमांशु रानाले ५१ तथा प्रियम रागले ३६ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका पवन सर्राफले तीन तथा कप्तान सन्दिप लामिछानेले एक विकेट लिए । यसअघि नेपालका लागि रोहितकुमार पौडेलले सर्वाधिक ६८ रनको